Qaar kamid ah shaqaalaha Shirkada Isgaarsiinta ee Golis oo abaal marino la gudoonsiiyey(Sawiro). • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Qaar kamid ah shaqaalaha Shirkada Isgaarsiinta ee Golis oo abaal marino la gudoonsiiyey(Sawiro).
Qaar kamid ah shaqaalaha Shirkada Isgaarsiinta ee Golis oo abaal marino la gudoonsiiyey(Sawiro).
September 21, 2012 - By: Abdirizak Shiino
Shirkada Isgaarsiinta ee Golis Telecom Somalia ayaa abaal marino gudoonsiiyey qaar kamid ah shaqaalaheeda kadib markii uu maamulka shirkadu uu qabto shirkii bilaha ahaa oo uu maamulku kula kulmi jirey dhamaan shaqaalaha ka shaqeeya Shirkada Golis xarunteeda Bosaso.
Ugu horayntii shirka waxaa madasha ka hadley hogaanka maamulka iyo mashaariicda Abdirisaaq Cali Cilmi una sheegay shaqaalaha dhawrida waqtiga shaqada, isla markaana ay ku dadaalaan sidii kor-u-qaadid loogu sameen lahaa waxqabadka shaqo.
Maareeyaha Guud ee shirkada oo Golis mudane Cali Xaaji Warsame oo isna kulankan ka hadley ayaa amaan iyo bogaadin u soo jeediyey shaqaalaha shirkadda isagoo ku tilmaamiyey in ay yihiin shaqaale hufan oo karti leh.
Maareeyaha wuxuu hadalkiisa ku daray “mudadii aan joogay shaqada waxaan ogaadey in shaqaalaha shirkadda Golis ay yihiin Shaqaale aad u dhawrsoon, isla markaana jecel in waajibkooda shaqo ay u gutaan si fiican oo kor u qaadaysa sumcadda shirkadda”.
Maareeyuhu wuxuu shaqaalaha kula dardaarmey in ay laba laabaan shaqada ay shirkadda u hayaan,wuxuuna u sheegay in ay mas’uul ka yihiin hantida dad weynaha soomaaliyeed ee share-ka ka ah shirkadda loona baahanyahay in la xifdiyo hantidaas mas’uulka laga yahay.
Ugu danbeyntii kulanka ayaa waxaa uu xafiiska shaqada iyo shaqaaluhu abaalmarino kala duwan siiyey shaqaale ka shaqeeya waaxyaha kala duwan ee shirkadda,isagoo ku tilmaamey iney tahey dhiiri galin iyo waliba iney muteysteen in la abaal mariyo shaqaalaha si buu yiri ay shaqaalaha kalena ay shaqadooda u dardar galiyaan.
Qaar ka mid ah shaqaalihii la abaal mariyey oo shirka ka hadley ayaa siweyn u soo dhaweeyey dhiirigalinta ay marwalba la daba taagan tahey maamulka shirkada Golis.
Eng C/Raxmaan Muumin Saalax oo kamid ahaa shaqaalihii abaal marinta la gudoonsiiyey ayaa sheegey in uu aad ugu faraxsan yahay abaal marintan oo uu ku sheegey iney tahey mid uu muteystey maadama buu yiri uu dadaal weyn ugu jirey sidii uu bishan u heli lahaa abaal marinta isagoo xusey inuu shaqadiisa uu sidii loo baahnaa u gutey kadibna uu muteystey in lagu abaal mariyo.
Hadaba Shaqaalaha abaal marinada la gudoonsiiyey iyo waaxyaha ay u kala shaqeeyaan waa kuwan magacyadoodu.